Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: #ABCDeebisaa: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (June) | OromianEconomist
Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: #ABCDeebisaa: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (June)	June 30, 2017
Tags: #ABCDeebisaa, #OromoProtests, #OromoRevolution, Africa, Ethiopia, Genocide, Genocide against the Oromo, Oromia, Oromia: #OromoProtests: Gabaasa FDG Oromiyaa, Oromo, Oromo people
OSA: Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa
OSA: STATEMENT ON THE ATTEMPT TO ALTER THE QUBEE (ALPHABET) OROMO WRITTEN ALPHABET. #ABCDeebisaa #OromoProtests
Human Right Council Ethiopia Releases Report On Rights Abuses Committed Under Current State Of Emergency
GPI 2017: Peacefulness in Africa deteriorates to worst level in almost a decade. Ethiopia suffered the biggest deterioration (both within SSA and globally)
Sidama Nation: TPLF fascist Ethiopia’s regime is destroying Sidama to erase its national identity for the first time in its history
Ethiopia and Its Manufacturing Industry: “There’s been a brilliant PR campaign on its part to sell a story that does not really exist.”
Godina Lixa Shaggar Magaalota Gincii fi Amboo Keessatti FXG Itti Fufee Oole.
Waxabajjii 26/2017 Gidduugaleessaa Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ginciitti Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo M/B Giincii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaan finiinee itti fufee jira . Gabaasaa dabalataan Walitti deebina. Continue reading →
Godina Oromiyaa Gara Garaa Keessatti FXG Itti Fufee Oole.
Waxabajjii 25,2017/Guyyaa Har’aa Ayyaana Iidaa Alfaxrii salaata Duraa fi boodattis Godinaalee Harargee Arsii fi Baalee keessatti Mormiin balaleffanna Mootummaa Abbaa Irree wayyaanee godhamaa jira.waraanni wayyaanees daandii marsee akka cabbiitti gadi naqamee ummata harka wal Qaxxaamursee mormii godhaa jiru daawwataa jira . Continue reading →
Jijjiramu tartiiba Qubee Afaan Oromoo ni mormina: Baratoona Amboo. #ABCDeebisaa #OromoProtests
(AMBOO, Oromiyaa, Waxabjj 15,2017) – Tartiibni qubee Afaan Oromoo jijjiiramuu hin qabu jechuun diddaan barattoota Amboo ammas akkuma itti fufetti jira.
Gareen komaandipoosti barattoota reebuudhaan mormii isaanii bittinsuullee barattoonni OMN tti himan.
Magaalaa Ambootti bifa haarawaan mormii fi diddaan erga jalqabee torbaan tokko laakkofsisee jira. Loltoota Agaaziitiin haga ammaatti lubbuun barattoota lamaa yoo darbu, 50 ol hidhamuun ni yaadatama.
Guyyaa hardhaa Waxabajjii 15 bara 2017ttis barumsi akkuma dhaabbatetti jira. Gareen komaandipoosti wayta barattoonni mana barumsaa deemanitti akka isaan hin barannee taasisaniiru.
Jiraattota dubbifne akka jedhanitti hardhas barattoonni bifa haaraan mormii dhageesisan. Ka’umsi mormii isaanii tartiiba qubee Afaan Oromoo jijjiramuuf karoora dhihaate irratti akka ta’es dubbatanii jiru.
Dhimma kanarratti barattuun nuti dibbinfe akka jettutti guyyaa hardhaa osoo isaan mormii geggeessaa jiranii loltoonni Agaazii reebicha irratti raawwachuun addaan bittinsuu ni dubbatti.
Loltoonni Wayyaanee konkolaataa heddutti fe’amanii magaalaa Amboo keessa ori’aa akka jiranis nuuf himteerti.
Barattoonni kunniin reebamuun mooraa mana barumsaa keessaa waan baafamaniif barumsi dhaabatee akka jirus ibsitee jirti.
Haga ammaatti barattoonni hidhaman meeqa ta’u laata gaaffii jedhuuf barattuun tun yoo deebiftu, konkolaataa sadiin qabamanii waan hidhamaniif lakkofsaan beekuun rakkisaadha.
Kana malees barattoonni hagi tokko magaalaa gadi dhiisanii baadiyatti baqataniiru. Barattoonni kutaa 10ffaa fi 12ffaa ammoo qormaata xumuranii gara maatii isaanitti deebi’aniiru.
Mana hidhaa magaalaa Amboo fi buufata leenjii poolisii Oromiyaa Sanqalleetti kanneen hidhamanis heddu ta’uu nutti himtee jirti.
Loltoota Wayyaaneetiin wayta ammaa kana guutumatti nagaa fi tasgabbiin dhabameera kan jettu barattuun magaalaa Amboo tun rakkoo kana irra aanuuf ammoo gaaffiin ummata Oromoo deebii argachuu qaba.
Ba’aa gabrummaa Wayyaaneen nurratti feetee jirtu ufirraa qaarisuu qofatu fala jechuun ni dubbatti.
Barattoota barumsa isaanii hordofuudhaaf gara mana barumsaa deemanitti danqaa uumuun loltoota Wayyaanee haarawa akka hin taane himtee, inni ammaa garuu sodaa jabaadhaan kan guuttameedha.
Marii maqaa Egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jedhuun magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteen dhalachuun himame.
Waxabajjii 11,2017/ Marii maqaa Egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jedhuun magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteen dhalachuun himame.
Mootummaan goolessituu Wayyaanee godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti maqaa badhaasa goototota misoomaa badhaasna jedhuun erga guyyaa gaafa jimaataa irraa kaasuun uummata magaalattii walitti qabuun uummata nagaa dhorkuu ittuma fuftee jirti. Sirni wayyaanee kan hundeen isaa holola kijibaa fi hannaan kan gad dhaabbate guyyaa har’aas godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee staadeemii magaalaa Naqamtee keessatti uummata nagaa walitti qabuun holola misoomaatiin uummata leeqaa afanffajjeessaa oole jira.Sobni yoomiyyuu sobuma.
Murni atakkaaroon kijibaan biyya bulchaa jiru Haayile Maariyaam Dassaaleeny fi Gootowwan Qeerroon magaalaa Naqamtees diddaa sirna Wayyaaneef qaban irraa kan ka’an guutummaa uummata walitti qabamanii jiran gidduutti wallee warraaksaa jalqabuun addaan fashaleessanii jiru.Kanumaan wal qabatees dargaggoonni 4 reebicha waraanni sirna wayyaanee irratti raawwataniin miidhamanii jiru.Dargaggoota kanneen ammaaf maqaaf suuraan nun geenye.Akkuma arganneen isin beeksisna.
Godina Arsii Aanaa Hanqooloo Waabeetti Wayyaanee OPDOn Sababaa Jijjiirraa Qubeen Ummata Gidirsaa Jiru.
Waxabajjii 11,2017/Wayyaanee OPDOn Godina Arsii Aanaa Hanqooloo Waabeetti Dilbata har’aa gandoota hundatti Barattoota fi Maatii barattootaa walitti qabdee Qubaan hin jijjiiramne umnoota Ummata Fincilaaf kakaasuu fedhantu akkas jedha malee Tartiibni Qubee hin sirreeffama jedhe malee Qubee hin jijjiira hin jenne mootummaan jechuun ummatatti kijibaa jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.
Waayeen Jijjiirraa Tartiiba Qubee Dabballoota Wayyaaneetiif Hojii Baasee Jira.
Waxabajjii 10,2017/ Shirri Wayyaaneen Tartiiba Qubee jijjiiruu jettee asiin baate. Wayyaanefii Ergamtuu Tigree OPDO rifaatuu guddaa keessa galchuun godinaalee hundatti ummata yaaftee qubeen hin jijjiiramne hin jijjiiramus jettee ololaa jiraachuun dhagayamaa jira.Bifuma kanaan Godina Arsii Aanaa Amiinyaattis maatii Barattootaa walitti qabdee Qubeen jijjiirame jechuun Kan Biyya keessaa fi Alaa hafarfamaa jiru kijiba kanaafuu ummanni keenya Oduu akkasiitif gurra hin kenninaa jettee itti kijibaa jiraachuu maddeen Oduu keenya Aanaa Amiinyaa irraa nuuf gabaasanii jiru
Wayyaaneen TPLF Raga Baatota Sobaa Maallaqaan Bitataa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.
Waxabajjii 10,2017/ Wayyaaneen Ummata Mallaqaan bittee Ragaa Sobaa Qeerroo Karaa nagayaatiin Falmaa turerratti ragaa baasisaa jirti.Haaluma Oromiyaa guutuu keessatti godhaa jirtuun Godina Arsii Aanaa Balee Gasgaar keessattis Qeerrorratti Ragaa bahaa jettee warra isiin mallaqaan bitte keessaa muraasni kanneen maqaan isaanii barruu armaan gadii kanarratti argaman ta’uun beekamee jira
Waxabajjii 10,2017.Dargaggoo Oromoo Jibriil Sammaan FXG Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aatti Bara darbe gaggeeffamaa ture adda dureedhaan kan hoogganaa ture isa jechuun wayyaaneen ji’a Sadeetii oliif barbaadaa erga turtee jirti.haata’u malee humnoota barbaacha isaa irratti bobbaafte heddummeeffachuun guyyaa kaleessaa harka diinaa galee jira.Dargaggoon kuni Loltuu raayyaa ittisa biyyaa ta’ee waggaa Afuriif hojjatee loltummaa dhiisee hojii dhuunfaa isaa hojjachuun jiraachaa kan ture ta’uunis ni yaadatama Yeroo Ammaa gara ma’aakalaawii geessaa jiraachuun maddeen keenya gabaasanii jiru
(OMN, Ambo wax 8, 2017) – Barattoonni mana barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi qeerroowwaan magaalitti guyyaa har’aa mormii jabaa gaggeessa oolu isaanii jiraataan magaalaa sanaa tokko OMNtti himan.
Baarataan Yuuniversiitii Amboo tokkos gaaffii fi deebii AFP waliin taasiseen dhiibbaan akka sabatti nurratti gaha jiru jabinaan mormii akka itti fufnu nu taasisa jedhe.
Barattoonni mana barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi qeerroowwan magaalaa Amboo mormii jabaa moootummaa wayyaanee irratti qaban guyyaa har’aa Waxabajjii 8, bara 2017 gaggeessa oolu isaanii jiraataan magaalitti OMNtti himan.
Barattoonni guyyaa har’aa mormii gaggeessatti oolan kunneen, barattoota kutaa 12ffaa barachaa turanii, guyyaa har’aa kanneen qorumsa seensaa Yuuniversiitii akka biyyittitti kennama ture warreen xumuranidha.
Barattoonni kunneenis tahee qeerrowwan Amboo, gaaffiin Oromoo deebii gaha hanga hin argannettii, sochiin warraaqsaa gara bilisummmatti taasisatti jiru jabinaan itti fufuna, duubatti hin deebinu jedhan.
Itti fufuun, mootummaan wayyaanee OPDOtti dhimma bahuun nu callisisuuf yaaluus, hanga gaaffiin saba keenya deebii quubsa argatuttii falmaa keenya jabaatee itti fafa jechuu isaanii jiratan Amboo dabaluun OMNtti himan
Mootummaan wayyaanee sagantaalee kanneen akka warraaqsaa diinagdee, carraa hojii dargagootaaf uumuu kan jedhuuf faayidaalee muraasa nuti dhadheessatti jiras jedhan.
Oduu wal fakkatuun madda oduu Azyaansi Firaansi pirees-AFP barataa Yunivarsitii Amboo tokko dubbisuudhaan haala rafamaa siyaasaa biyyaa Itoophiyaa waliin wal qabaate nageenya fi tasgaabbii amansiisaan akka hin jirees gabaaseera.
Akka gabaasa AFPtti, rakkinni nageenya fi tasgaabbii moora yuuniversiitii Amboo keeessattis tahe dhaabbiilee barnoota biyyitti keesuma immoo Oromiyaa keessatti bal’inaan jiraachuu saaxileera.
Barattoonni hedduun yakkaa tokko malee, manneen barnoota irraa uggurama fi ari’ama akka jiran kan dubbate barataan kun, daran hammachuun sarbaminsa mirgaa nammoomaa, sochii warraaqsa sabicha ammas bifa haaraan akka ka’uu taasisa jedheera.
Dhuma irrattis barataan Yunivarsitii Amboo kun ammas taanan mormiiin ummatta Oromoo jabinaan itti fufa jechuun AFP himmeera.
“Abbootin Gadaa Hora Arsadiitti Faloo ummata keenya du’eef goona jechuun Arsaditti wal gahanii Gumaa ummata keenya dhume Rabbii nuuf haa baasu jedhan. Faloon keenya kan gumaa ijoollee teenya baasu fi kan bilisummaa teenya dhugoomsu jechuun eebba bal’aa kennan Abbaa gadaa dabalee jaarsoliin eebba eebbisan hunduu.” Jawar Mohammed, Waxabajjii, 8, 2017.
Qubeen Afaan Oromoo Qabsoon Argame Qabsoon Tikfama.
Bittootni Itophiyaa seenaan ummata Oromoo, aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne, hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraaf hojjatan. Dhabama aadaa, afaanii fi seenaa ummata Oromoo irratti kan ofii dagaagfatuun akeeka bittootaa waan tureef wanneen eenyummaa Oromoo mul’isan hundi ugguramoo kan ittiin hin baratamne, ittiin hin hojjatamnee fi ittiin wal hin quunnamamne taasifamuun dhabamaatti dhiheeffamaniii turan.
Bittootni eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf yaalii ol aanaa godhan illee beektotni Oromoo garuu matayyaanis tahe gareen dhabama irraa hambisuuf gumaachi godhan ol aanaa dha. Afaan Oromoo afaan quunnamtii qofa osoo hin taane Afaan hojii fi barnootaa akka tahuuf yaaliin baroota dheeraaf adeemsisan milkaa’ee Afaan hojii fi kan barnootaa kan tahe waggoota 26n dura bara 1991 keessa tahuunis ni yaadatama. Continue reading
Sabboontota dargaggoota Qeerroo Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa Ebla 11/2014 irraa eegaluun bifa qindaa’een qabsiisan keessa nama tokko ta’uun beekamaadha. Continue reading →
Biiroon Barnoota OPDO Oromiyaa keessatti tartiiba qubee Afaan Oromoo A B C E F….Z ture jijjirudhaan tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru.
Akka gabaasa kanaatti biroo barnoota Oromiyaa kena jedhamuu fi kan jalee wayyaanee OPDOn hogganamu jiru qormaata gahaa fi sababa ifa ta’e osoo lafa hin kaa’iin tartiiba qubee faaan Oromoo waggota hedduuf, Odoo OPDOnuu hin ummamin hojiirra oolaa ture tartiiba isaa faalleessuun isa ummanni Oromoo fi saboonni kuunilleen ittiin beekan A B C D…..Z jedhu jijjiruun ka’uumsa isaa L.. …..taasisuun kutaa 1- amma 8tti kitaaba maxxansee barsiisuu eegaleera.
Jijjiramuu tartiiba qubee afaan Oromoo kanaaf sirnichis ta’e ogeeyyiin afaanii amma ammaatti ibsa ballaa fi sababa isaa kan lafa hin kaa’iin yoo ta’u; Barattonnii fi barsiiftonni manneen barnootaa adda addaa gutummaa Oromiyaa keessa jiran deemsa kana ifatti balaaleeffachaa akka jiran gabaafameera. Continue reading →
[…] Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-30 June 2017 […]
2.	Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (August) | OromianEconomist - September 1, 2017